वुहान कोरोनाभाइरसको डर वित्तीय बजारमा सर्छ अर्थव्यवस्था वित्त
क्लौडी क्यासलहरू | | संकट, हाम्रो बारेमा
केहि दिन अघि कसैलाई थाहा थिएन यो के हो, र वर्तमानमा वुहान कोरोनाभाइरस दिनको मुख्य विषयहरु मध्ये एक बन्छ। यसको अनौंठो र अचानक देखा पर्दा चिनियाँ अधिकारीहरू र सम्पूर्ण विश्वलाई जाँचेको छ। यो सबै घबराहट संसारको शेयर बजारहरु लाई प्रभावित छ, देखा पर्ने हरेक समाचार संग। के कोरोनाभाइरस साँच्चै डराउनुपर्ने एक महामारी हो? किन स्टकहरू हालका दिनहरूको गिरावटमा पीडा भोगिरहेका छन्? के योगदानमा ड्रपहरू वास्तवमै नयाँ रोगसँग सम्बन्धित छ?
हामी सबै महामारीको विकासको लागि पर्खिरहेका छौं, र यो हो यसको प्रसार धेरै छिटो छ। यद्यपि यसको प्रकृतिको बारेमा धेरै थाहा छैन, अधिकारीहरू यसको काम रोक्न काममा लागेका छन्। यसैले, पहिलो संकेतहरू यसले कसरी काम गर्दछ भनेर बुझ्नको लागि देखिन सुरू गरियो, र यसरी राम्रो नियन्त्रण उपायहरू लिन सक्षम हुन। डर, तर, कोरोनाभाइरस वरपरको अवस्था र यस पटक यो भएको छ जहाँ देखि सबै भन्दा पहिले यस अवस्थामा आउँछ, र त्यो क्षण चिनियाँ चंद्र नयाँ वर्षको साथ मिल्छ। यो केवल एक क्षण हो जहाँ लाखौं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विस्थापनहरू छन्। एक प्रकृति संग एक महामारी कि यो समय यो फरक बनाउँछ।
1 वुहान कोरोनाभाइरस के हो?
1.1 महामारीको विकास र विस्तार
2 कुन क्षेत्रहरूलाई सबैभन्दा धेरै हानी भइरहेको छ?
3 बजारमा कोरोनाभाइरसको प्रभावबाट के आशा गर्ने?
वुहान कोरोनाभाइरस के हो?
वुहान कोरोनाभाइरस कोरोनाभाइरस परिवारसँग सम्बन्धित छ, आरएनए भाइरसहरूको ठूलो समूह एउटा सामान्य भाइरल खाम। आजसम्म त्यहाँ on different विभिन्न प्रकारका कोरोनाभाइरस छन्, विभिन्न प्रकारका संक्रमणहरूको जो एकमा निर्भर रहन्छ। केही सामान्य चिसो जस्तै हल्का लक्षणहरू सहित, ब्रोन्काइटिस, ब्रोन्कोइलाइटिस, निमोनिया, मध्य पूर्व श्वसन सिन्ड्रोम (MERS-CoV को रूपमा चिनिन्छ) वा गम्भीर तीव्र श्वसन सिन्ड्रोम (SARS-CoV) जस्तो केहि।
वुहान कोरोनाभाइरस (२०१--nCoV), २००२-२००2002 को सार्स महामारीको धेरै सम्झना दिलाउने। पेरिसको पाश्चर संस्थानको महामारी विज्ञान विभागका प्रमुख अर्नाउ फोंटनेटले भने कि नयाँ भाइरस २०१ 2019-एनसीओभी आनुवंशिक रूपमा AR०% सार्सको बराबर छ। यो तुलनाले यो निष्कर्षमा पुर्‍यायो कि सायद यो एक सार्स उत्परिवर्तन हुन सक्छ।
थप रूपमा, यो हिजो भनिएको थियो कि यो विशेषता यो थियो कि यो संक्रामक छ लक्षणहरू देखाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै। यद्यपि यो भर्खरै अस्वीकार गरिएको छ, जसले रोगको कार्यप्रणाली बुझ्नको लागि निश्चित अज्ञानता र निरन्तर अध्ययनको आभा प्रदान गर्दछ।
महामारीको विकास र विस्तार
चिन्ताहरू छन् कि यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिन सक्छ, कि चीन मा भाइरस समावेश छैन र महामारी पैदा गर्न सक्छ। यस विषयको परिमाण बुझ्नको लागि, दिनदिनै प्राप्त गरिएको डाटामा हेर्नुहोस्। सब भन्दा सान्दर्भिक मध्ये, निम्नलिखित हाइलाइट हुनु पर्छ:
पुष्टि भएका केसहरूको संख्या एक हप्तामा २220० बाट २2.850० पुगेको छ। १ 13 ले गुणन गर्दै। यो हिजो, सोमबार, जनवरी २ 27 को रूपमा थियो, वर्तमानमा आज, २ 28 औं, यी लाइनहरू लेख्ने समयमा, there,०० संक्रमित भइसकेका छन्।
दर्ता भएका मृत्युको स a्ख्या एक हप्तामा to बाट 3१ मा पुगेको छ। २ 25 पटक भन्दा बढि गुणा यो जनवरी २ 27, आज मंगलबार २ 28, १०106 जनाको मृत्यु भएको तथ्या .्क सार्वजनिक गरिएको थियो, यो हिजो भन्दा २ 25 भन्दा बढी हो। निको पारिएको अन्तिम संख्या been० भएको छ।
डब्ल्यूएचओ ले हिजो एक रिपोर्ट सुधार्यो जसमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमलाई "मध्यम" बाट "उच्च" बढायो। चीनको राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम रेटिंग "धेरै उच्च" छ।
त्यहाँ चीन बाहिर outside 44 दस्तावेजी मुद्दा छन् मानिस जो रोग संकुचित छ। बिभिन्न देशहरू मध्ये हामीले सिंगापुर, फ्रान्स, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, थाईल्याण्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भियतनाम, नेपाल र क्यानडा फेला पार्दछौं।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रम्पले हिजो ट्वीट गरे कि चीनलाई सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ भाइरस समावेश गर्न।
कुन क्षेत्रहरूलाई सबैभन्दा धेरै हानी भइरहेको छ?
सरकारले अपनाउँदै आएका महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू प्रदान गर्दै, विभिन्न कम्पनीहरु को मजबूत शेयर बजार गिरावट दर्ता गर्न सुरू। वुहान कोरोनाभाइरसको अन्त्य हुने विकासको डरले लगानीकर्ताहरू लगानीकर्ताको लगानी छिटो बृद्धि भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरू मध्ये हामी फेला पार्दछौं होटेलियर्स, लक्जरी होटल, एयरलाइन्स, र केही कच्चा माल। यदि होईन भने, सामान्य पीडित सबैको लागि गिरावट आउँछ, सब भन्दा स्पष्ट हामी पहिले उल्लेख गरिएकाहरू बीचमा फेला पार्नेछौं।
आर्थिक मन्दी जुन पहिले नै ध्यान दिन थालिएको छ, यी क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरण गरियो। मेलीले China होटलमा चीनमा परिचालन गरिरहेको छ। यो दर्ता गरियो कि त्यहाँको पेसा कम छ, जबकि यसका सेयरले हिजो 5..5% गिरावट दर्ता गर्‍यो। अर्कोतर्फ, एयरलाइन्स आज गिरावटको साथ जारी छ, कालो दिनको तुलनामा उनीहरूले हिजोको अलि अलि बढी सन्तुलित भई। आईएजी जस्ता कम्पनीहरूले श I्घाईका लागि इबेरिया उडानहरूको दरहरू अधिक लचिलो बनाएको स्वीकार गर्दछन्।
बजारमा कोरोनाभाइरसको प्रभावबाट के आशा गर्ने?
विभिन्न विज्ञ र वित्तीय विश्लेषकहरू यसलाई जोड दिन चाहन्छन् अर्थव्यवस्था मा प्रभाव अझै पनी अप्रत्याशित छ। यस कारणका लागि होईन, त्यहाँ बिभिन्न सम्पत्तिहरू छन् जुन उनीहरूको स्वभावले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्दछ, जस्तै इलेक्ट्रिकल वा फार्मास्यूटिकल सामानहरू। सुरक्षित सुन सम्पत्ति, जस्तै सुन र चाँदी, ले पूँजीलाई ध्यानमा राख्दै केही वृद्धि प्रदर्शन गरिरहेको छ जसले नाफा लिदै शरण लिन खोजिरहेको छ। र यो यो हो कि हामीले त्यो बिर्सनु हुँदैन हालका महिनाहरूमा एक ठूलो सामान्य अपवर्ड ट्रेंड छजहाँ बजारहरू कर्पोरेट नाफामा कुनै पनि प्रतिकृयाको डर बिना उठेको देखिन्थ्यो। संयुक्त राज्य अमेरिका को मामला मा ऐतिहासिक उचाई मा बजार वा यूरोप को मामला मा वार्षिक उच्च।
मूल्यहरू पुगेको स्तरहरूमा, माग बहुगुणितको साथ, यती उच्च छ कि कुनै पनि घटनाको बजारमा संवेदनशील असर गर्दछ।
विकास र रोगको सामना गर्नु पर्ने मार्ग हेर्न हामीले पर्खनु पर्नेछ। यसमा ओगट्न थाल्नु व्यक्तिपरक हुन सक्दछ, र बदलामा हतारमा। यी केसहरूमा पैंतृक गर्नको लागि ठूलो प्रत्याशा र प्रतिक्रिया क्षमता आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै गरी, विभिन्न विज्ञहरू र विश्लेषकहरूले विगतमा कसरी सार्स जस्ता अन्य भाइरसहरू देखा पर्‍यो भनेर याद गरे, उनीहरू एक पटक नियन्त्रित भएपछि राम्रो बजार पुनः प्राप्त भयो। यस बीच, यसको बदलामा, तिनीहरू मध्ये केही शेयरहरू अर्को केही महिनाको अवधिमा कसरी पतन भयो भनेर पनि सम्झन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » हाम्रो बारेमा » वुहान कोरोनाभाइरसको डर वित्तीय बजारमा सर्छ
के नेटफ्लिक्स विश्लेषकहरूले हामीलाई बताए जस्तो राम्रो मूल्य हो?